Kuboshwe ovalele izisebenzi efemini - Ilanga News
Home Izindaba Kuboshwe ovalele izisebenzi efemini
Bezikhiqiza ama-mask okuvika i-corona ubusuku nemini
KUBOSHWE umnikazi wemboni eyenza ama-mask, kanti lapha yingesikhathi amaphoyisa nezisebenzi zikahulumeni begasela kule ndawo eseDurban North, eThekwini. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
ZIMKHALELE umnikazi wemboni eyakha ama-mask okuzivikela kusomqhele (coronavirus) emuva kokuvalela izisebenzi zakhe izinsuku ngoba efuna ziqhube umsebenzi.
Kubikwa ukuthi lezi zisebenzi bezivalelwe kule mboni eseGlen Anil, eDurban North, eThekwini, kusukela ngoMsombuluko odlule ngoba kumele zenze umsebenzi wokwakha ama-mask okuzivikela kusomqhele adingeka ngobuningi kulezi zinsuku.
Kuthiwa iziphathimandla zincinzwe indlebe ngale femu zabe sezigasela kuyona kungazele muntu ngokubambisana nama-phoyisa. Zibalelwa ku-14 izisebenzi ezitholakale zivalelwe kule mboni kwabe sekushaqwa umnikazi wayo ongowomdabu waseChina.
UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nezeMvelo KwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube, esitatimendeni asithumelele abezindaba, uthe lokhu kuze emuva kwezikhalo ebeziqhamuka emiphakathini ngentengo yama-mask okuzivikela kusomqhele njengoba kuthiwa abiza u-R780 iyinye.
“Ngesikhathi sivakashela izitolo kungazelele muntu, sithole ukuthi abantu emphakathini bakhokhi-swa imali engango-R780 nge-mask iyinye.
“Namuhla izisebenzi zomnyango ngaphansi kophiko oluvikela abathengi oluphenya izikhalo ngokwephulwa kwelungelo labathengi nokunyuswa kwentengo ngokungemthetho, lusindise izisebenzi ezingaphezulu kuka-14 ebezibhe-kene nalesi simo esehlisa isithu-nzi.
“Umnikazi wale mboni uboshiwe kanti umnyango wezabasebenzi usuqale uphenyo. Ngizishayela ihlombe izisebenzi zomnyango namaphoyisa ngokubuyisa isithunzi salezi zisebenzi. Kumanje izisebenzi zibuyiselwa emakhaya azo emalokishini akhele iTheku,” kusho uNkk Dube-Ncube.
Uphinde wagxeka inkampani yonogada eqaphe le femu ngokuhlukumeza izisebenzi zomnyango ngokuzikhomba ngezinhlokohlela zezibhamu.
Uthi useyalele abomthetho ukuba baphenye ngale nkampani, ikakhulukazi owomdabu waseChina, obephethe isibhamu esikhulu ehlukumeza izisebenzi zikahulumeni ukuthi unayo yini imvume yokuphatha isibhamu.
Uthi ufuna nokuthi abekwe icala lokudukisa ingalo yomthetho.
Uqhube wathi umnyango usazoqhubeka nokulwisana nalabo abasebenzisa ukusabalala kwaleli gciwane ukudayisa ukudla nokunye ngentengo ephakeme.
Okhulumela amaphoyisa kuzwelonke, uBrigadier Vishnu Naidoo, ukuqinisekisile ukubo-shwa komnikazi wale mboni ngecala lokuvalela izisebenzi izinsuku. Uthe ugcinwe esitokisini kanti uzovela enkantolo yaMantshi eThekwini namuhla ngoMsombuluko.
Previous articleOmahosha bacela isibonelelo kuhulumeni
Next articleunozinti umincile ngemigomo ebekelwe abadlali bosuthu